Tamin'ny volana aprily 2019, ny dingana faharoa amin'ny haino aman-jery Import sy Export faha-125 an'ny China (izay antsoina hoe "Canton Fair") dia nosokafana tamina fivoriambe iraisam-pirenena tany Guangzhou Pazhou sy ...
Tamin'ny volana aprily 2019, ny dingana faharoa amin'ny haino aman-jery Import sy Export faha-125 an'ny China (izay antsoina hoe "Canton Fair") dia nosokafana tamim-pahibemaso tao amin'ny Ivon-toeran'ny Convention and Exhibition International an'ny Guangzhou Pazhou. Ny orinasanay dia nandefa ekipa orinasa 7 olona hitondra vokatra vaovao 2019 any amin'ny Canto ...Hamaky bebe kokoa »
Nosokafana tamin'ny fomba lehibe tao amin'ny efitrano Guangzhou Pazhou ny foara faha-126 Canton.
Nosokafana tamin'ny fomba lehibe tao amin'ny efitrano Guangzhou Pazhou ny foara faha-126 Canton. Ny Canton Fair, izay noheverina ho vanim-potoana fanondranana an'i Shina, dia nandalo làlana naharitra mihoatra ny antsasaky ny taonjato nandritra ny 100 mahery. Hatramin'ny nijoroantsika tamin'ny 2007, manana ...Hamaky bebe kokoa »